Istaraatiijiyadda - Joornaalka Naqshadeynta
Uv Sterilizer SunWaves waa nadiifiye awood u leh inuu baabi'iyo jeermiska, caaryada, bakteeriyada iyo fayrasyada 8 ilbiriqsi gudahood. Loogu talagalay in lagu burburiyo culayska bakteeriyada ee saaran sagxadaha sida koobabka kafeega ama maraqa. SunWaves waxaa la alifay iyadoo maskaxda lagu hayo xaaladda COVID-19 sanadka, si ay kaaga caawiso inaad ku raaxaysato tilmaanta sida cabbitaanka shaaha kafateeriyada si badbaado leh. Waxaa loo isticmaali karaa labadaba xirfadlaha iyo deegaanka guriga sababtoo ah tilmaan fudud waxay ku nadiifisaa waqti aad u gaaban iyada oo loo marayo iftiinka UV-C kaas oo leh nolol dheer iyo dayactir yar, sidoo kale ka caawinta yaraynta walxaha la tuuri karo.
Barnaamijka Dhacdooyinka Naqshadeynta
Barnaamijka Dhacdooyinka Naqshadeynta bandhigyo, tartanno naqshadeyn, aqoon isweydaarsiyo, la-talin naqshad waxbarasho iyo mashruuc daabacan oo ujeeddadiisu tahay in kor loogu qaado naqshadeeyayaasha Ruushka iyo magacyada dibadda. Hawlaheena waxay kicinayaan naqshadeeyayaasha ku hadla luuqada ruushka si ay u buuxiyaan aqoontooda iyo xirfadahooda ayagoo u maraya mashruucyo caalami ah oo ka caawinaya inay fahmaan doorkooda naqshada bulshada, sida kor loogu qaado loona sameeyo waxsoosaarkooda tartan, iyo abuurida hal abuur cusub.
Qalab Waxbarasho Iyo Tababar
Qalab Waxbarasho Iyo Tababar Mandala shirkadeed waa aalad waxbarasho iyo tababbar cusub. Waa is-dhexgal cusub oo gaar ah oo mabaadi'da hore ee mandala iyo aqoonsiga shirkadeed ee loogu talagalay in kor loogu qaado wada shaqeynta iyo guud ahaan waxqabadka ganacsiga. Intaas waxaa sii dheer waa qayb cusub oo ka mid ah aqoonsiga shirkadda. Mandala shirkadeed waa hawlo kooxeed ama nashaadaad shaqsiyeed maamulaha. Waxaa si gaar ah loogu talagalay shirkad gaar ah waxayna midabeeyaan koox ama shaqsi qaab xor ah oo dareen leh halkaas oo qof walbaa dooran karo midab ama goob kasta.
Qalabka Curyaameysan Ee La Qaadi Karo Ee Ultrasonic
Qalabka Curyaameysan Ee La Qaadi Karo Ee Ultrasonic Prisma waxaa loogu talagalay tijaabinta maaddooyinka shay-aan gashaneyn ee jawiga ugu daran. Waa baaraha ugu horeeya ee ku daraya muuqaalka sare ee waqtiga-dhabta ah iyo iskaanka 3D, sameynta tarjumaadda cillad aad u fudud, yaraynta waqtiga farsamada goobta. Iyada oo ku dhawaad xirid aan la aqbali karin iyo qaabab kormeer oo dhowr ah oo gaar ah, Prisma ayaa dabooli kara dhammaan codsiyada tijaabada, laga bilaabo dhuumaha saliida illaa qaybaha hawada. Waa baaraha ugu horeeya ee leh xog isku duubnaan, iyo jiil warbixineed oo otomaatig ah. Isku xirnaanta Wireless iyo Ethernet waxay u oggolaaneysaa unugga in si fudud kor loogu qaado ama laga soo ogaado.
Nidaamka Nadiifinta Biyaha Sheybaarka
Nidaamka Nadiifinta Biyaha Sheybaarka Purelab Chorus waa habka ugu horeeya ee nadiifinta biyaha ee loogu talagalay in lagu habeeyo baahiyaha sheybaarka shaqsiga iyo booska. Waxay bixisaa dhammaan heerarka biyaha nadiifka ah, iyagoo bixinaya qaanso, dabacsan, oo ah qaab gaar ah. Waxyaabaha moodeelka ah ayaa loo qaybin karaa shaybaarka oo dhan ama midba midka kale wuxuu ku xidhan karaa qaab munaarad gaar ah, isaga oo yareynaya nidaamka raadkiisa. Xakamaynta qulqulatooyinka ayaa bixiya heerka qulqulka qulqulaha baahsan oo la xakamayn karo, halka iftiinka iftiinka uu muujinayo heerka Chorus. Tiknolojiyadda cusub ayaa Chorus ka dhigaysa nidaamka ugu horumarsan, lana yareeyo saameynta deegaanka iyo kharashyada socda.
Kakanaanta Martigelintu Uv Sterilizer Barnaamijka Dhacdooyinka Naqshadeynta Qalab Waxbarasho Iyo Tababar Qalabka Curyaameysan Ee La Qaadi Karo Ee Ultrasonic Nidaamka Nadiifinta Biyaha Sheybaarka